SOICARE ceramic and solid wood cool aromatherapy hamandoana diffuser huile essentielle, China SOICARE ceramic and solid wood cool mist aromatherapy moisturizing huile essentielle mpanamboatra, mpamatsy, orinasa - Sunpai Industries Limited
SOICARE seramika vita amin'ny seramika sy hazo matevina aromatherapy mangatsiatsiaka diffuser tena ilaina menaka
Famonoana mikraoba, handravaka
INDRAY ALIBABA, PAYONEE
· DESIGN MINIMALST miaraka amin'ny TEXTURE voajanahary: ny diffuser menaka manitra sy ny hamandoana SOICARE dia noforonina tany Danemarka mikasika ny natiora sy ny fanahy Minimalista ao an-tsaina. Izy io dia miaraka amin'ny tampon'ny ceramic eco-friendly sy tongotra mafy. Vonona ny hifangaro milamina amin'ny haingon-trano misy safidy loko 3 izy.
· Fandraisana an-tanana MUTIPLE TIMER: ny diffuser sy ny huile essentielle SOICARE dia novolavolaina miaraka amin'ireo mpiorina 4-INTERVAL: 1hr, 3hr, 6hrs, ary ON ON foana. Ireo jiro famantarana ny famantaranandro dia natao an-tsokosoko mba haminavina eo ambonin'ny latabatra.
· MIST LASTING: Ny diffuser menaka sy huile essentielle SOICARE dia miaraka amin'ny fitehirizan-drano 180ml ahafahanao mankafy fofona tsy misy lelafo misokatra amin'ny 2 MIST MODES: Mode Continuous dia manome aromatherapy mahery mandritra ny 10 ora, Mode Intermittent ((30 sec ON, 30 sec OFF)) manome maharitra 20 ora miaraka amin'ny fofona malemy kokoa.
· Natao ho an'ny torimaso maivana: TSY MISY BEEPS ny diffuser menaka manitra sy moisturizer an'ny SOICARE. Azonao atao ny misafidy ny hampiasa azy io TSY MISY MAZAVA. Ny diffuser huile essentielle SOICARE dia miasa ULTRA-QUIETLY, ka zara raha tsikaritra na dia mandritra ny sasakalin'ny alina.
· Mora ny mampiasa sy mitazona: ny différant sy ny huile huile essentielle SOICARE dia tsy hoe BPA-FREE fotsiny, fa novolavolaina koa hampiasa menaka esansiela amin'ny fomba mandaitra. Ny lava-lava, 6FT POWER CORD dia lava ampy hahatratra ny faladiam-rindrina mety. Ny teknolojia SMART AUTO SHUT-OFF dia miantoka ny fiarovana azo antoka amin'ny fotoana rehetra rehefa maina ny rano.
Mitohy / miserana
SP-L30 400ml amazon malaza hazo varimbazaha tena ilaina ny menaka oliva menaka manitra